ओली नेपाल बाहिर हुँदा प्रचण्डले के-के गरे ? गोप्य वैठकदेखि बक्तब्यसम्म बाहिरियो यस्तो रहस्य — sancharkendra.com
ओली नेपाल बाहिर हुँदा प्रचण्डले के-के गरे ? गोप्य वैठकदेखि बक्तब्यसम्म बाहिरियो यस्तो रहस्य
विधयेक आफूसँग भएको सहमति विपरितका प्रावधान समेटेर ल्याइएको भन्दै डा.गोविन्द केसी अनशनमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली देश बाहिर थिए। प्रधानमन्त्री शनिबार बिहान स्वदेश फर्कंदै थिए। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
नेपालले असंलन्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यस्तो बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका एउटा अध्यक्षले पक्ष÷विपक्षमै वक्तव्य जारी गरेको विषय पनि अहिले चर्चामा छ।
प्रधानमन्त्री ओली फर्केपछि यो विषयमा धारणा नेकपाले बनाउन सक्थ्यो। तर यसमा पनि नेकपाले हतारो गरेको देखिन्छ। नेकपा स्रोतका अनुसार यो वक्तव्यका लागि नेकपाका शीर्ष नेताका बीचमा ओली देश बाहिर नै रहेका बेला छलफल भएको थियो। त्यही छलफलमा वक्तव्य दिने सहमति पनि बन्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियन (ईयू) का मुलुक राजदूतहरूले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दिएको संयुक्त वक्तव्यबाट नेकपा नेताहरू चिढिरहेका बेला दाहालको भेनुएजुलाका विषयमा बक्तव्य आएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्केपछि दाहालले दिएको वक्तव्यलाई विषयान्तर गर्न खोजे। उनले यस्ता विषयमा हतारो गर्न नहुने संकेत गर्दै पत्रकारले दाहालले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रधनमन्त्रीको धारणा बुझ्न गरेको प्रयासलाई विषयान्तर गरे।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘मैले सुनेको छु अलिकति। तर, म भर्खर मात्र आएको छु। यस्ता विषयमा राम्ररी नबुझिकन, नपढिकन प्रतिक्रिया दिनु वाञ्छनीय होला जस्तो मलाई लाग्दैन्।’
नेकपा नेताको ‘झम्सिखेल बैठक’
प्रधानमन्त्री विदेश रहेका बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरूको ललितपुर झम्सिखेलमा ‘गोप्य बैठक’ बस्यो। बिहीबार साँझ अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताको बैठक बस्यो।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट वहुमतले पारित गर्नु अघिल्लो साँझ बसेको शीर्ष नेताहरूको उक्त बैठक विधेयक पारित गर्ने विषयदेखि पार्टीको अड्किएको एकता प्रक्रिया, सरकारका नियुक्तिलगायत विषयमा केन्द्रित थियो।
सरकारले नियुक्तिलागयत विषयमा छलफलपछि निर्णय गर्ने स्थायी समिति बैठकको सारलाई पछिल्लो नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले वेवास्था गरी अघि बढेको आवाज पनि उठेको स्रोतले बतायो। संवैधानिक परिषद्ले गत ६ माघमा ५ वटा आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। झम्सिखेल बैठकमा सचिवालय तथा सरकारमा रहेका नेताहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा भने सहभागी थिएनन्।